Xafiiska xidhiidhka arrimaha dawlada,dhaqanka iyo Dalxiiska DDSI ooKhabiiro u kala Diray 5 Gobol iyo Taariikhda Kalli. - Cakaara News
Xafiiska xidhiidhka arrimaha dawlada,dhaqanka iyo Dalxiiska DDSI ooKhabiiro u kala Diray 5 Gobol iyo Taariikhda Kalli.
Dhanaan(CN) Sabti July-18-2015.Sida aynu wada ogsoonahayba waxaa 18ka bisha maskaram 2008.T.T.I ay DDSI martigalin doontaa Xuska maalinta Dalxiiska Dalka oo sanadkan Deegaanka soomaalida lagu qaban doono. Hadaba Sida uu noo sheegay kuxigeenka xafiiska arimaha dawlada,dhaqanka iyo dalxiiska DDSI mudane Baashe cabdi xafiiska oo ka duulaya hawlaha iyo diyaargarawga balaadhan eek u soo fool leh ayaa uu xafiisku gudagalay diyaargaraw balaadhan oo isugu jira soo qufida taariikhda iyo goobaha dalxiiska ee deegaanku leeyahay kuwaasoo isugu jira kuwo qadiimi ah oo aan hore bulshada dalka iyo caalamkaba. Musuulka ayaa intaa ku daray inuu xafiisku u jihaystay sidii uga midhodhalin lahaa Qorshaha GTP2 ee ku aadan Dalxiiska iyo dhaqanka Deegaanka anagoona qorshayaal iyo hawlo daraasaad la xidhiidha aanu dejisanay.
Mudane Baashe ayaa sheegay in xafiiska ay ka go’an tahay dib usoo noolaynta iyo soo qufida taariikhda,Dhaqanka iyo goobaha dalxiiska islamarkaana islamarkaana ay lagama maarmaan u tahay sharafta Qaranimo iyo umadeed ee ay shacabka deegaanku leeyihiin maadaama lagu tiriyo deegaankeena goobta ay taariikhda iyo hal abuurka maansooyinka soomaalida ay DDSI ahayd.
Sidoo kale waxa uu sheegay in xafiisku uu khabiiro soo samaysa daraasaad u kala direen gobolada faafan,Sitti,Shabeele iyo jarar kuwaasoo durba gudagalay waajibaadkoodii shaqo lagana sugayo natiijadii oo isugu jirta maqal iyo muuqaal. Dhanka kale khabiirada xafiiska ee kormeerka hawleed u tagay Degmada Dhanaan oo u waramay wariyaha cakaaranews ayaa noo sheegay in ay kormeer ku tageen goobta taariikhiga ah ee Kalli iyadoo ay wehelinayeen Maamulka degmada oo uu horkacayay sii hayaha jagada gudoomiyada Degmada dhanaan mudane cali axmed faarax.
Tuulada magaca qadiimiga ah leh ee kalli ayaa ah goobtii ay soomaalida itoobiya ku xaqiijisay itoobiyaanimadeena islamarkaana ay ku eryeen gumaystihii kaligi taliska ahaa ee ingiriiska. Hadaba qabalahan taakhiga ah ee kalli ayaa kadib markii ay khabiirada xafiiska iyo maamulka degmada dhanaan u tageen daraasaadka lagu daahfurayo taariikhda iyo aataarta kuduugan agagaarka tuuladaasi, Khabiirada xafiiska ayaa goobtaas ka soo helay macluumaad muuqda oo muhiim ah kuwaasoo raadraac wanaagsan ah kana mid yihiin goobihii taariikhda sayid maxamed cabdule xasan iyo daraawiishtiisii sida Xaruntii taliska Ciidamadii darawiishta ee SMCX, banka agabbar oo ah goobtii fardaha sayidka ay ku baratansiin jireen xarunta biyo dhaamiska ciidamadii daraawiishta ee sayid maxamed,sidoo kale waxaa daraasaadkan lagu soo saaray godad ama Guryo guryo afka kaxidhan oo dhulka hoostiisa ah.
Isku soo wada duuboo hawlan shaqo iyo joogtaynta samaynta daraasaadka ayaa ku kamid ah hawlaha ugu waawayn ee xafiiska xidhiidhka arimaha dawlada, dhaqanka iyo dalxiiska DDSI kusoosaarayo taariikhda deegaanka iyo goobaha soojiidasha dalxiiska leh ee deegaanka,islamarkaana loogu diyaargaroobayo xuska 28aad ee maalinta dalxiiska itoobiya ee sanadka 2008 T.I. oo laguqaban doono DDSI.